Dhacadadaan ayaa waxay ka dhacday magaaladda caasimadda ah ee Muqdisho iyadoo ay u dhaxeysay lamaane Soomaaliyeed oo lagu kala magacaabo Cabdi Cadde iyo Hani, Cabdi sheekaduna waxay ku bilaabaneysaa sidatan:-
Waxaan ku dhashay degmada Xamar Weyne ee magaaladda Muqdisho sanadka markuu ahaa 1985-kii, waxbarashadeyda waxaan kusoo qaatay iskuulka Hoyga Xamar �Hamar boarding School�
Waxaan ahaa ruux aad u fur furan kaftan badan, oo dadka oo dhami ay jacel yihiin, waxaan ahaa ruuxii aanan tex gelin jaceylka, waxaana ahaa ruux iskala kaftama oo kaliya gabdhaha balse aanan tex gelin caashaqa ay u qabaan.
Waxan lahaa wiil saxib wanaagsan ah, inkastoo ay dadka qaar ay dhihi jireyn labadaan ruux waa walaalo, wuxuuna suuqa Bakaaraha uu ku lahaa dukaan, kaasoo aan ugu tagi jiray marka aan iskuulka kasoo baxo.
Sidoo kale Hani waxay degneyd xaafadda Bakaaraha dhanka degmada Hodan, mar walba waxay adeeg u soo doonan jirtay suuqa Bakaaraha, halkaasoo oo aan ku arki jiray.
Gabadhaan Hani ah waa gabar cajiib ah oo qalanjo ah �Qalanjo Maxaa ladhahaa� �dabcan waa gabar dheer, maariin ah ama cad, dhex yariis leh, timaha ay dabada ugu joogaan, indho deeraley leh, ilko yar yar leh, bishimihii baashida loogu tala galayna leh� dabcan waa taasi qalanjada dhabta ah.
Mar walba waxay soo hor mari jirtay dukaankii wiilkii saxibkey uu lahaa, anna waan salaami jiray, walow ay mar walba salaanta ila dhaafi jirtay ama aysan iga qaadi jirin.
Aad ayaan u yaabay waxaan is-dhahay war nin yahow dhaxaa dumarka ku daadiso maanta adiga ayay ku heysataa, yaabka iyo aftaag kadib, ayaa waxaa dhacday maalin maal-maha kamid ah anigoo hoos taagan boosteejada laga raaco gawaarida Xamar weyne aadi jirtay oo ku tiilay xaruunta hoose ee Idaacadda Shabeelle ee magaaladda Muqdisho, ayaa waxay indhaheygu qabteen Hani, saa waan ku leexday waan la hadlay anigoo muujiyay geesinimo iyo ad adeeg, hase yeeshee salaanta wey iga qaaday, markaas ayay farxad iyo ray-reyn iga dareentay, waxay i weydiisay waxa aan la faraxsanahay, waxaana u sheegay inaan iyada aad ula yaabanahay, saa waxay iga codsatay inaan u sheego waxa aan la yaabanahay, waxaan ku iri dhawr jeer ayaa ku salaamay salaanta waad ila dhaafi jirtay, sidaasi darteed ayaa aad ugu faraxsanahay. Qosol qosol qosol.
Waxaan u sheegay inaan deganahay degmada Xamar weyne, iyana waxay i sheegtay inay suuqa Bakaaraha ay degan tahay, waxaan ka codsaday haddii ay lee-dahay teleefan inay i sheegto, wey ii sheegtay, anna waxaan u sheegay teleefankii aan lahaa.
Isla habeenkii ayaa waxaa bilaabay wacitaan, sheeko kaftan, anigoo sharaxaad ka siin jiray sida ay u qurxoon tahay, iyadoo mar walba aan hadlaayo aad u qosli jirtay. Muddo ayaa sidaas ku wada soconay, waxaan dareemay inaan ka maarmi karin gabadhaasi oo aan aad u jeclahay, xaqiiqda waxaa weeye haddii aanan habeen kaliya aanan maqlin inaanan seexan jirin.
Waxaan u sheegay wiilkii saxibkey ahaa marna walaalkey ahaa, aad ayuu igu qoslay, malaha waxaan is-dhahay wiilkii wuu waashay qosol qosol qosol, waxaan ku iri sheekada qosol ka dheer, waana iga dhab qoftaas aad ayaan u jeclahay ee talo iyo tusaale igu filan i sii.
Wuxuu igu yiri isagoo ila kaftamaaya �Nin yahow ma-xasuusataa meeqo gabdho ayaa ila soo xiriirtay oo i leh na bar Cabdi Cadde, aad adigana diidi jirtay, hadaba qofta aad maanta jeclaatay kuwaasi maxay kaga duwan tahay. Ugu danbeen wuxuu i siiyay talo oo ah, inaan u sheegto inaan jeclahay, isagoo ku yiri ku dheh �Xabiibi Hani habeen walba horta maxaan kusoo wacaa ileen daawo ima siisid oo dhaqtar ima kaa soo qorinee�.
Taladii ayaan qaatay waxaan u sheegay inaan jeclahay, dareen xoogana aan u haayo, aanan ka maarmin, qosol ayay gashay iyo inay igu dig digato, saa waxan ku iri walaaley aniga muddo ayaa ku aqaanaa intaasoo dhan waan wada sheekeysaneynay, aadna waan ku jeclahay ee maanta wax ila qabo,
Si walba oo aan habeenkaas ula hadlay Hani wax wey iga ogolaan weyday, weyna igu gacan seertay, waxayna igu dhahday �iga raali ahow waxba kulama qaban karo�, waan ciishooday, aad ayaa u carooday, oo maxaa la caroonaayaa? Wax kale lama caroonaayo waayo qofta aan jeclahay ama aan rabo ayaa sidaas i dhaheyso, xaqiiqdii waxaa jiray boqolaal gabdho ah oo i doon dooni jiray hase yeeshee inay jiraan iyo in kale waxba uma kala ogeyn, habeenkaas wixii ka danbeeyay dib dambe uma wicin Hani.
Waxaa noqday qof uun fikir kasoo haray, dhalinyaraddii asxaabteyda aheyd oo aan aalaaba daba socon jiray waan ka go�ay, kubada cagta oo aan ku fiicnaa badanaana aan ciyaari jirayna faraha ayaa ka qaaday, waxaan noqday nin isku buuqsan.
Qoyskayga ayaa ila yaabay, asxaabteyda dhan baa ila yaabeyn, ugu danbeen iyadoo uu xaalku meeshaasi maraayo ayaa muddo 35 habeen kadib waxaa i soo wacday Hani, xaqiiqdii codkeyda markaan maqlay, wadnaha ayaa i kala go�ay, oo muxuu ila go�aay? Sababtoo ah waxaa dib u maqlay qoftii ay nafsadeyda ay dooneysay.
Waan wada hadalnay habeenkaas iyadoo igu tiri maxaa kuugu dhacay waan ku waayay, xaqiiqdii aboowe waan kusoo xiisay ee lama rabin inaad iga aamusto, ee Caddow ma�ogtahay aad ayaan kuugu xiisay, waxaan u xiisay sheekadaadii faraha badneyd, qosolkaaga xad dhaafka ahaa iyo fur furnaantaada oo aad aan ula dhacay.
Deetana waxaan ku dhahay mar walba aad dooneyso waad i soo wacan kartaa, aad ayaana kusoo dhaweyn doonaa, habeenkaas wixii ka danbeeyay iyada uun baa i soo wici jirtay aniga maanan wici jirin, mar walba oo ay i soo wacdo waxay i dhihi jirtay �Ruux qaali ah baa tahay, nin la ilaawi karo matihid, nafta adiga camal si-naba kuuguma diidi karto� markaas ayaan dareemay inuu dareyn rabitaan ku lamaanan yahay uu galay Hani.
Muddo aanan sidaasi u sii fogeyn ayaa waxay ugu dhahday ka waran haddii aan oraah gaaban ku dhaho, saa waxan ku iri waa maxay, markaas ayay igu tiri �I LOVE YOU� intaan qoslay markeyga ayaa ku dhahay caawa inaad igu ciyaarto miyaa keentay? Maxaase la-dhahaa waan ku jeclahay? Kadib ayaa waxay igu dhahday �haddii aad iga aarsaneyso waa meesheeda balse wuxuu Rabi marqaati ka yahay inaan maanta ku jeclahay, walibana aan si dhab ah kuu jeclahay�, aad ayaan u farxay anigoo ku iri mahadsanid kuna soo dhawoow gacmo furan, wixii xilligaas ka dambeeyay waxaa noqonay mucaashaqiin lagu sheekeysto.
Mar walba waxaan ku kulmi jirnay gurigeyga ama gurigii ay iyadu degneyd, waxaan baray dhamaan qoyskeyga, iyadana sidoo kale waxay i bartay dhamaan qoyskeuda, xaqiiqdii inta gabar ay jeclaan karto wiil ayay i jeclaatay Hani, anagoo nolol macaan iskaga jirno ayaa mushkiladu waxay timid kadib markii uu Hani soo doontay wiil ay qaraabo ahaayeen oo ku noolaa dalka Finland, kaasoo doonaayay inuu guursado, isla xilligaas waxaa soo baxay abtiyaashey oo ku noolaa Yurub ayaa hooyadey ku dhahay wiilkaaga u soo dir Nairobi lacag baan iskugu dar-darnay Yurub baan kuugu soo dhoofineynaa, maxaa yeelay qoyska aan ka dhashay wuxuu ahaa qoys aad u tabar yar runtii, waxna maanan heysan.
Hani ayaa i soo wacday waxayna ii sheegtay inuu nin soo doontay ayna iga dooneyso inaan soo doonto, anna waxaa igu furan buufis dibadda ah, ileen dibad oo iga maqan bay abtiyaashey igu yiraahdeyn kaalay Nairobi, si�aan halkaasi uga sii baxo, iyo Hani oo i leh i soo doono.
Maalmo kadib Hani ayaa ku gacan seeray waxaanu ku dhahay iga raali noqo oo kuma soo doonan karo maxaa yeelay dibad baan rabaa inaan aado, si�aan wax ugu qabto qoyskeyga oo iska dhiban, iyadana waxay igu tiri �nin yahow haddii aan dibad rabo nin baa i soo doontay intaan guursado baan Yurub sidaasi ku tagi karaa, balse nafteeda adiga ayay ku rabtaa ruux aan kuugu doorsan karana dunida kuma noolo ee fadlan i guurso� waxaan wada hadalnaba Hani oo iga careysan baa iga tagtay.
Laba habeen kadib Hani hooyadeed ayaa i soo wacday waxayna igu tiri �Cabdi cadow gabadhii Hani aheyd aad ayay u xanuunsan tahay cuno iyo cabitaan wey ka go�day, hurdana wey diiday, ee hooyo waxaan ku sheegayaa gabadhii adiga mooyee nin kale ma-rabto ee Cabdow gabadhaas si sharaf leh ugu imow oo guurso�, anna intaan iska ooyay baan ku dhahay aniga ayaa dib kuugu soo jawaab celin doono.
Hani ayaa igu timid anigoo guriga joogo qol ayaa intaan galnay ayay bilowday ooyin aan dhamaad laheyn, deetana waxaa meesha ka bilowday sawaxanka ooyin ah, anna dhankayga ayaa ka bilaabay ooyintii, waxaa marxaladaasi ku sugneyn in ka badan hal saac.
Kadib Hani ayaa igu dhahday i sheeg adigoo og inaan aad ku jeclahay kaana maarmin maxay tahay sababta aad dibad iga dooraneyso Cabdow? Anigoo aad uga calool xun ayaa waxaan ku dhahay dhawr arrimood ayaa ku diiday guurkaaga, waa mida koowaad, aniga waxan ka dhashay qoys faqiir ah oo aan waxba heysan, teeda kale hooyadey waxay heysataa caruur yar-yar aniga ayaana ugu weyn waxbana maheysto, waxaa jira kuwo abtiyaashey ah oo ku nool qaaradda Yurub waxba nama siiyaan, balse Alle ayaa ka dhawaajiyay inay hooyadey ku dhahaan wiilkaaga keen Nairobi waxan u gadeynaa boos ama Line, si�uu Yurub u yimaado, kadibna uu wax idinku qabto.
Wax yar intey aamustay ayay igu dhahday �Waan dareemi karaa culeyska ku heysta, lakin Cabdiyow waxaa nahay dad dhalinyaro ah wax walbana waan qabsan karnaa ee fadlan hana kala geyn, waa balan inaan garabkaaga istaago oo aan aniga xataa ku shaqeeyo, hadaan rabo yaanyo aan gado balse hana kala geyn� dood iyo qeylo hor leh ayaa galnay deetana waxaa inoo xigay oohin���oohin��..oohin, ugu danbeen waxay igu tiri haddii aad doonto i diid, ama inac, balse waxaa si naxariis leh kaaga codsanaayaa inta aadan Nairobi aadin inaad Xamar ila joogto kadib aad kasoo qeyb gasho arooskayga, anigana waan ka ogolaaday.
Hani waxay ogolaatay inuu guursado wiilkii ay qaraabada ahaayeen wuxuu yimid magaaladda Muqdisho, waxaana arooska Hani lagu dhigay Hotel Shaamoo oo ku yaalla magaaladda caasimadda ah ee Muqdisho, aniga iyo 6 wiilal aan saxibo nahay waxay Hani inoo keentay Invition cards si�aan uga qeyb galno arooskayda.
Waxaa dhacday inaan ka qeyb galo arooskii Hani, habeenkaas waan u adkeysan waayay wixii meesha ka dhacaayay, iyadoo ay iga muuqatay tiiraanyo iyo calol xumo aad u daran, waxan la-dhacay ooyin anigoo u adkeysan waayay wax-yaabihii habeenkaasi meeshaasi ka socday, wiilashii aanu saxibada aheyn ayaa i aamusiin waayay, iyagoo igu dhahaayay �Hani oo kaliya gabar maaha, nin rag ayaa tahay wax baro, shaqeyso, Hani mid ka qurxoon kuna jecel weyn meysidee�.
Sidaas ayaa uga qeyb galay arooskii Hani, markii ay todobada ka baxeyn ayaa waxay aadeyn iyada iyo ninkii qabay wadanka isku taga Imaaraadka Carabta halkaasoo ay u dalxiis tageyn, kadibna uu dacwo u bilaabo ninka qabo Hani.
Waxaan iskaga soo tagay magaaladda Muqdisho, waxaan imid dalka Kenya, waxaana halkaasi iga bilowday dacwad, taasoo ay i bilowday gabar ay lacag siiyeen abtiyaashey si�an Yurub u tago, wax ka yar sanad ayaa joogay dalka Kenya, deetana waxaa nasiib u yeeshay dalka Sweden oo aan hada ku noolahay.
wixii faafaahin ah kala xariir email adress
Comment by Muhammed on July 5, 2012 10:03 am
Asc. Maasha ALLAAH. Boqolaal sheeko jacayl oo qoran waan akhriyay lkn sheekadaan waxay uga duwantahay qaabka ay u qorantahay.
Gabar Soomaaliyeed oo ninkii ay jecleyd loo-diiday iyo ninkii oo waashay